ကိုအောင်သာငယ်က AK-47 ပစ်ဖူးတာမို့ထည့်ရေးထားတာကိုး… ကျွန်တော်ကတော့ လေသေနတ်လောက်ပဲပစ်ဖူးပါတယ်… တက်ဂ်မှတော့ ရေးပေးရမှာပေါ့… မေ့တာတွေလည်းမေ့ကုန်ပြီလေ…လာမယ်ကြာမယ်နော်…
ရေးမယ် အန်ကယ်... ဒီတစ်ခါ ခလေးအတွေးလေးနဲ့ ရေးထားတာ တစ်မျိုးလေးဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။
ဟယ်တော့ လက်တောင့်မတို့ ဘူး tag ထားတာကို
အခုတစ်လော အရှုပ်တွေလုပ်နေလို့ :)
ပျော်စရာတော့ကောင်းတယ်။ ရေးတော့ရေးချင်သား။ ခက်တာက ဘယ်ပထမဆုံးကိုမှ မမှတ်မိတာပဲဗျ။ ဟီး
ပထမဆုံးတွေ ဖတ်သွားတယ် အစ်ကို။ ကျောင်းက အဆိုင်းမန့်တွေ ပြီးတာနဲ့ ရေးမယ် အစ်ကို။ နေရာသစ်မှာ အသားကျ ပျော်ရွှင်ပါစေ။း-)
ရေးမှာပေါ့။ ဖြေးဖြေးပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥာဏ်သိပ်မကောင်းလို့ မမှတ်မိဘူး။ ပထမဆုံးသောက်တဲ့ အရက်ဆိုတာရော ကျော်သွားလို့ ရလား အဟဲ။
တစ်ခါတလေ ဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ကောင်းပါတယ်။ ကျနော့်ကိုသတိတယ တဂ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအစ်ကို။ ကျနော်လည်း ပထမဦးဆုံးတွေ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ...
မချိုသင်းပြောသလိုပဲ- သိပ်မမှတ်မိ တော့ဘူး။ ရေးထားဖူးတဲ့.ပထမ အကြိမ်တွေကို..ထပ်ဖြည့်ရေးပေးပါ့မယ်။ ရှာကြံ ဦးဏှောက်စား တဲ့..ပထမဆုံး ဘလော့ ဘော်ဒါကြီးပါလား။း)
အစ်ကိုရေ ပထမဆုံး ရည်းစားစာပဲပါတယ်။ သူ့ အကြောင်းလည်း မပါပါလား။ ဒီလိုကျော်လို့ရတယ်ပေါ့။ ဟဲဟဲ ရေးမယ်နော်။ ပထမဆုံးတွေ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။
ငါးတန်းတုန်းက ပထမရတာက Augustine မှာလားအစ်ကို...။ Augustine မှာရတာဆိုရင်တော့ အားလား..လား..။ လက်ဖျားခါတယ်...။ အိ!
p.s- ပထမရဖို့မပြောနဲ့ Augustine မှာ ၁ ကနေ ၂၀ အတွင်းတောင် တစ်ခါမှမ၀င်ဖူးပါ။ A ခန်းက မကျအောင်တောင် မနဲကျားကန်ဆွဲခဲ့ ရတယ် အစ်ကိုရေ....။
အကိုရေ ပထမဆုံးတွေရေးဖို့အတွက် ဦးနှောက်ကို ပထမဆုံးပြန်စားရဦးမယ်.Tagတဲ့လူက သတိတရနဲ့Tagထားတယ်ဆိုတော့လည်း ရေးရမှာပေါ့ဗျာ..အချိန်တော့နည်းနည်းယူဦးပါရစေ...အကိုပျော်ရွှင်နိူင်ပါစေ
အကိုရေ ပထမတွေကိုပြန်စဉ်းစားတာ ငယ်ငယ်ကဟာတွေ သတိပြန်ရတဲ့အတွက် အကိုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရေးမယ်ခင်ဗျ .. နဲနဲတော့ စောင့်ရမယ် ..
အလုပ်လည်း နဲနဲရှုပ်နေလို့ .. နောက်ပီး ..
ဦးနှောက်က သိပ်အလုပ်မလုပ်ချင် ဖြစ်နေတော့ .. ပထမဆုံးတွေကို တော်တော် ပြန်စဥ်းစားယူရမယ် ..။
Pti - မစ္စတာ ခုထိ မရေးသေးဘူး။ လာပစ်မှာနော်။
တူမောင်မျိုး - ရေးထားတာလေးတွေ ကောင်းတာပဲဟာ
လင်း - အရင်ဆုံးရေးတာ လင်းနော် ကျေးကျေး အထူး။
chaos - ကြာနေတာကို အတော် ကြာနေပြီ။
ကလူသစ် - မှတ်မိချင်တာတွေတော့လည်း မှတ်မိနေသား
ကောင်းကင်ကို - နောက်ဆုံးမှ ရေးရင် နိုဘယ်ဆုပေးမယ်း)
moe cho thin - ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဘာမှ မပြောတော့ဘူးး)
nyein chan aung - တမူထူးခြားတဲ့ ပထမဆုံးတွေပါညီ
k - ဒီဘော်ဒါကြီးက အရမ်း သဘောကောင်းတာပါနော်
ဇင်ယော် - မိန်းမ ဘေးမှာ ရပ်ကြည့်နေတယ်ဟ တိုးတိုးပြော။
BLACK DREAM - augustine မဟုတ်ဘူး ညီရေ့ ရန်ကင်း အ.လ.က.(၄)
Saung Yune La (aka) Way - ညီရေးတာလည်း ဖတ်လို့ ကောင်းပါ့။
MyowinZaw - ပြန်သတိရစရာရှိသည်များအား ပြန်သတိရပါစေ။း)
လာမပစ်ပါနဲ့တော့... ရေးပြီးကြောင်း သတင်းပို့.. အတိုးနဲ့ အကြွှေးဆပ်ထားတယ်.. ;)